Wafdiga Farmaajo oo maanta dib ugu laabanaya Muqdisho. - Awdinle Online
Wafdiga Farmaajo oo maanta dib ugu laabanaya Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saacadaha Soo socda lagu wadaa in uu ka baxo Magaalada Jabuuti ee Caasimada dalka Jabuuti waxa uuna ku sii jeedaa Magaaladda caasimada ah ee Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa shirkaasi waxaa wakiil ugu ah Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo ay wehliyaan guddiga farsamada Dowladda Faderaalka Soomaaliya u qaabilsan wadahadalada.
Agaasimaha warfaafinta Madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa bixitaanka Madaxweynaha ku xaqiijiyay qoraal uu ku daabacay bartiisa bulshada.
“Madaxweyne wuxuu goor dhaw u duulayaa magaalada Muqdisho, waxaana wada hadallada garwadeen kasii noqonaya RW Xasan Cali Khayre, xubnaha Golaha Wasiirada ee la socda iyo Guddiga Farsamada ee DFS ku matalaya wadahadalladan”ayuu yiri Cabdinuur.
Guddiga Soomaaliya ku matalayasa Wadahadalada ee uu hoggaaminayo Wasiir Sabriye.
Guddigaan ayaa waxaa hoggaaminaya Wasiirka arimaha guddaha Faderaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye halka guddiga kale ee Somaliland uu hoggaaminayo wasiirka arimah dibada Maamulkaasi Fartoon.
Previous articleSomaliland oo war cusub kasoo saartay shirka- Jabuuti
Next articleMadaxweynaha Koonfur Galbeed Oo Xariga Ka Jaray Xarunta Madaxtooyada Degmada Xudur :-(Sawiro)